मलेशियामा ईलि’गल हुनुहुन्छ ? कसरी घर फर्कने ? के के चाहिन्छ कागजात? – ramechhapkhabar.com
मलेशिया सरकारले आफ्नो देशमा अवैध रुपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकहरु माथि धरपकड गरिरहेको छ । पछिल्ला केहि दिनहरुमा मात्र ईन्डोनेशियन, म्यानामारी, बंगाली नेपाली गरि सयौं ईलि’गल कामदारहरु पक्राउ परेकाछन् । मलेसियाको कानून अनुसार विदेशी कामदारले भिसामा उल्लेख भएअनुसारकै रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्नुपर्दछ। तर विभिन्न कारणले कम्पनी छोडेर कामदारहरु ईलि’गल बन्दै आएका छन् ।